Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika, Va Joram Gumbo, vanonzi havana kumiswa pamberi pedare redzimhosva sezvange zvakatarisirwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa neMuvhuro neZimbabwe Anti Corruption Commission, Zaac.
Asi VaGumbo vambosvika havo kumatare edzimhosva kwechinguva, ndokubva vadzoserwa zvakare kumahofisi eZaac.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kugweta raVaGumbo, VaSelby Hwacha, kuti nyaya iyi iri kufamba seyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Asi vane ruzivo nezviri kuitika muZaac vaudza Studio7 kuti VaGumbo vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva dzavakasungirwa neMuvhuro.
Vatiwo ichokwadi kuti VaGumbo havana kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo pamuka dzimwe mhosva dzavari kupomerwa.
VaGumbo vakasungwa neZaac vachipomerwa mhosva yekuita zvehuori panguva iyo vaive gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu munyika.
VaGumbo vanonzi vakaita zvehuori apo vakashandisa imba yehanzvadzi yavo, Mavis Gumbo, kuti ishandiswe semahofisi ekambani yeZimbabwe Airways, iyo vanonzi vakaita kuti iumbwe muna 2012 apo vaive gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu.
VaGumbo vanonziwo vakanyorera bhanga guru renyika musi wa 10 Nyamavhuvhu 2017 vachiriudza kuti rikweretese kambani yeZimbabwe Airways mari inoita miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica.
Musi wa 21 Nyamavhuvhu 2017, VaGumbo vanonzi vakazivisa kuti mari yakanga yabva kubhanga guru renyika ishandiswe mukubhadhara rendi yemba yaMuzvare Gumbo, uye imwe yacho kuti ishandiswe mukuvakiridza imba iyi.
Hurumende inoti zvakare musi wa 12 Gunyana 2017, kambani yeZimbabwe Airways yakaisa mari inoita miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica mubhanga rekambani yeMaclaten Holdings, inova kambani yemwanasikana waMuzvare Mavis Moyo, Clara Rachel Mudzami.
Hurumende inoti zvakaitwa naVaGumbo zvaive kunze kwemutemo, uye zvisingatarisirwe kuitwa nemunhu mukuru muhurumende.